Xaalada qaxootiga cusub iyo sida loo caawin karo | Somaliska
Qaxa iyo qaxootinimada waxay noqdeen qeyb nolosheyda ka mid ah, in kasta oo waqti badan laga joogo markii ugu dambeysay ee aan qaxo hadane shaqdeyda maalinlaha ah ayaa i soo xasuusisa wax badan. Qaxootigii ugu badnaa aduunka ka dib dagaalkii labaad ee aduunka ayaa qaxaya maanta.
War-bixinta sanadlaha ah ee UNHCR waxaa lagu sheegay in ku dhawaad 60 Miljan oo qof ay maanta dunida qaxooti ku yihiin iyada oo ay laba meelood meel ka mid ah yihiin caruur. Qaxootigaas waxaa sababay dagaalada dunida ka jira oo ah kuwa cusub iyo kuwa kale oo horey u socday. Sida ku cad war bixintan 5-tii sano ee la soo dhaafay waxaa dunida ka qarxay 15 dagaal 8 ka mid ah waxay ka qarxeen qaarada Afrika Tusaale ahaan: Central Arica Republic, Libya, Mali, Nigeria, South Sudan, iyo brundi. Seddex ka mid ah waxay ka qarxeen Bariga dhexe sida Syria, Irak iyo Yemen. Yurub waxaa ka socda dagaalka Ukrain. Sidoo kale Asia waxaa ka jidha bara-kicinta Burma. Intaas waxaa sii dheer dagaalo hore oo weli ka socda Somalia iyo Afganistan.
Dad Badan oo naftooda la cararaya ayaa soo mara wadooyin kala duwan si ay u helaan mustaqbal iyo nnolo wanaagsan, sanadkan kaliya dadkii ugu badnaa ayaa ku dhintay biyaha Mediterranean-ka iyagoo u soo socda wadamada Yurub.
Sawirka Wilke Yara ee 3 sano jidhka ahaa Aylan ee ku dhintay biyaha u dhexeeya Turkiga iyo Greece ayaa soo jiitay indhaha caalamka, Ka dib markii lagu faafiyeen aalada internet-ka ayuu sababay in dad badani ay kacaan oo ay sameeyaan ficil bani’aadaminimo.
Sida loo soo dhaweynayey dadka qaxootiga ah ayaa ahayd arin aad loogu farxo iyadoo laga hor geynayey cuno, cabitaan iyo dhar laga xidhto dhaxanta. Qof walba intuu awoodo ayuu bixinayey si dadkaas loo caawiyo.
Dad badan oo soomaali ah oo aan ku arkay social media (aalada internetka) ayaa aad uga soo horjeeda in ay caawiyaan dadka qaxootiga ah iyagoo ku doodaya “ma caawin karno carab, marka hore waa inaan soomaalideena caawinaa”
Marka ugu hoeysa waad qaldan tahay hadii aad aaminsantahay in qaxootigu yihiin carab oo kaliya, marka labaad dadkaaga aad dooneysid in aad caawiso waxay ku dhex jiraan dadka kale ee qaxootiga ah, si aad iyaga u caawisid waa inaad joogtaa meesha qaxootiga guud lagu caawinayo.
Waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago sida ugu fiican ee loo caawin karo dadka cusub, waa adiga oo dhiira-geliya, la wadaaga qibradada iyo in aad noqotid tusaale fiican oo positive ah.
Fadlan qofna ha ku dhihin wadan ayaa wadan kale ka fiican ama sharciga ayaa dhaqso lagu helaa wadan hebel, maxaa yeelay qofka inuu sharci helo ama waayo kuma xidhna wadan ee waxay ku xidhantahay kiiska dacwada qofka.
Dhamaan dadka cusub ee wadankan yimid waxaan leeyahay soo dhawaada anigoo u rajeynaya in Illahay u fududeeyo nolosha cusub.
arinka 2 sano ku dar kaasiba waa dhibaato tagane
Waa kula qabaa fikirkaaga.
Dadka ku marmarsiyoonaya qolo hebel ma jecli ama waa qolo hebel waa dad jaahiliin ah aqoonin sadaqada waxa eey tahay waxa baxsatid xaga alle ayee ku jirtaa. Adiga hada sadaqo baxsaneeynin Dadka sadaqadoda muran ha galinin.
Waa idin salamay marka hore waaa maxay waxa dhacaya qaxooti aad fara badan aya soqaxaya africa iyo asia waliba dadki ugu ganisana aya so qaxaya aduunka wa harka labada galin in heyadihi muslimintu ama biniadnimadi ey samen wayen la arakayo manata cadanku inu samenayo waa layaab somaliduna waaba dadki bilaway qaxa iyo qaxotinimada walow hada ee shekadu tahay laga baray laga badi hada wax ka irahdo saqdaqad waa asxan lofalo qof dhibatesan wuxu rabo ha ahade marka dadka deganshaha hesta sweden siba somalida waxan ku borinaya walalyaal waxad hestan wax ka bixiya hal karoonba allaha kadhige thanx all of u
Alle ha u gargaaro dhamaan daadka dhibaan musliin iyo galba Asa abuure
waa fikrad fican in laso dhaweeyo anagaba markan wadanka imanay wa nalaso wadheyay ee ayagana markoda hala garab istaaago Allana haa ufududeyo
ismaciil lajeclowka chelsea says:
runtii wa in la cawiya walalhen so qaxa ee syria wa dad muslim ah
September 14, 2015 at 02:44
somalida ka ma dhamado kala sooc waxan ku ogeen qabyalad hada waxey keyneen ine ka laso can islaamka ay dha haan wa carab ma cawi ney no anako cawin somalida kale dadku wa seen wa dad wlaala ah oo islaam ah somaliye san isku dhama
September 14, 2015 at 06:30
Subaxaana laah Maxay wax Caawiyaan Yagiibaa Caawin u baahane’ Caruurtan maqlay maqlay waxbaa LA Caawiyaa eega’ Maxay wax caawinkaraan yagiibaa ba’oodu is yeedhsaday oo waa dadka aduunka ugu faqiirsan Carabta qaxaysana dalkoodiibaa Burburay Mooyaan oo Hooybay u baahanyihiin maahine waa dad qani ahaan jiray oo dhawr iyo labaatankii sano Ee Somali Burbursanayd waxay Ku jireen badhaadhe waana dad aqoonyahano ah meeshay tagaana wax kusoo siyaadinaya’ dadkan yaacaya waxaa ka buuxa dad aqooni ka buuxdo oo Suurianku waa dad Dhakhaatiirta ugu badan soo Saara waa dad Engineerada iyo Culuumta Technologyda aduunka LA jaanqaadsanaa’ dhaqaale ahaan iyo Cilmi ahaan toona Somali ma higsan karaan yagiibaa Tuugsanaya oo daafaha Caalamka Ku Tabaalaysan’ maasay Ku leeyihiin Caawin’ horaa loogu maah maahay Tiisaba daryeelaa tu kale Ku dara ‘ hooyadaa iyo aabaha ama qaraabadaadaba oo Africa Ku Tabaalaysan ayaad 100 dollar u diri Kari la’adahay maasaad iska NAC NAC leedihiin’ riyo haday dib leeyihiin Dabadooday Ku qarin lahaayeen. Yaan nafta been loo sheegin ninka webka haystaana xoogaa Jaahilnimaa ka Muuqata waa Fikirkiisaan U jeedaa raqiiska ah.